लकडाउनमा मूड फ्रेस गर्न ‘श्रीमान बिक्रीमा’ ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > रोचक > लकडाउनमा मूड फ्रेस गर्न ‘श्रीमान बिक्रीमा’ !
वासिंटन । कोभिड-१९ को महामारीबाट बच्न विश्वका अधिकांश सरकारले लकडाउन घोषणा गरेका छन् । सुरुमा त कोभिड १९ को महामारी समर सुरु भएसँगै हराउला भन्ने थियो । तर दिन, साता हुँदै महिना बितिसक्दा पनि यो नष्ट नहुँदा लकडाउन पनि लम्ब्याउन थालिएको छ ।
आम मानिसहरु भने लकडाउनको दिक्दारीबाट ‘रिफ्रेस’ हुन अनेक उपाय खोजिरहेका छन् । खासगरी अमेरिकाका विभिन्न सहरका मानिस पछिल्लो समय लकडाउनको दिक्दारीबाट मुक्त हुन अनेक किसिमका होडिङ बोर्ड तथा ब्यानर टाँग्न थालेका छन् । ‘टिकटक’, ‘भिडिओ कल’ जस्ता कुराले मात्रै नपुगेपछि घरको बार्दलीमा रोचक र ठट्यौला पेन्टिङ तथा ठूला ब्यानर टाँगेर रमाइलो गरिरहेका छन् ।
२०७७ वैशाख १९ गते १७:४२ मा प्रकाशित
ऋण र उधारोमा विद्यालय कतिञ्जेल चलाउने !
एभरेष्ट बैंकको एजिएम पुस २३ गते, २५ प्रतिशत लाभांश पारित गर्दै